Juventus oo u jiheysaneysa dhanka Iniesta – Gool FM
(Turino) 23 Maajo 2017. Kooxda xafidaneysa Serie A ee Juventus ayaa xiiseynaysa kubbad qaabeeyaha Barcelona Andres Iniesta waa haddii uu laacibku go’aansado inuu ka soo huleelo kooxda reer Spain sida ay warinayaan warar ka imaanaya Talyaaniga.
Xiddiga reer Spain ayaa waxa uu qandaraaskiisu dhici doonaa dhammaadka kal ciyaareedka soo socda welina lama cusbooneysiin heshiiskiisa Blaugrana.
Corriere dello Sport iyo Gazzetta dello Sport ee ka soo wada baxa Talyaaniga ayaa subaxan wariyay in Bianconeri ay diyaar u tahay inay xagaaga u dhaqaaqaan Iniesta haddii ay jiraan wax shaki ah.
Uma badna in Iniesta uu ka soo tagi doono Barca, yeelkeede joogista Dani Alves ee kooxda Juve ayaa caawin karta inay ku qanciso inuu isna aado haddii uu jiro wax bur-bur ah oo ku aadan wada hadalada qandaraas kordhinta.
Labada jariiradood ayaa sidoo kale warinaya in Patrik Schick ee u safta Sampdoria iyo Mattia De Sciglio oo ka tirsan Milan ay noqon doonaan saxiixyada ugu horreeyay ee xilli ciyaareedka.
Antonio Conte oo maamulka Chelsea kula dagaalamaya sidii uu Costa u sii joogi lahaa kooxda
Man United oo baajisay shirkii jaraa'id ay qaban lahayd maanta ka hor Final ka Europe League